allsanaag.com - Soomaalida oo saaran Diyaarad aan Duuliye Run ah wadin Skip to content
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3210	Days	02	Hours	18	Minutes	01	Second	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Soomaalida oo saaran Diyaarad aan Duuliye Run ah wadin Details
Written by khalid	Maqalaay Warlaay Madaxweynohow Ma Laguu Warramay Madaxweynuhu wuxu u dhaqmaa sidii "Maqalaay Warlaay" oo kale. Ma oga maqaamkiisa madaxweynanino oo sidii Injineer shirkad madax u ah oo goob diyaaradeed booqday ayuu u dhaqmayaa. Nasiib xumo Soomaali in isagoo kale dhusha lagaga keeno waa loogu tala galay.
SHACABKA SOMAALIYEED OO SAARAN DIYAARAD AAN DUULIYE RUN AH WADIN
Astaamaha lagu garan karo Siyaasadda dalk kasta iyo geedi socodkeeda waxaa laga tusaale qaataa Hoggaanka uu dalkaas iyo shacabkiisa ay sameystaan iyo tallaboyinka ay had iyo jeer ay qaadaan Madaxda dalkaas oo dhan kasta leh.
3) Inuu ka soo horjeestey qaabkii lagu heshiiyey oo ahaa Nidaamka Federaaliga ah isagoo yiri waa qaab ku cusub Somalia una baahan inaan lagu deg deign, Wasiirkiisa arrimaha gudahana si cad u yiri Dawladda ayaa u magacaabesa Maamulo ku meel gaar Gobollada Dalka iyagoo ilowsan in nidaamka iyagaba lagu soo doortey uu ahaa Federaalka. 4) Inuu Madaxweynaha yiri Ethiopia kalama baxeyso Ciidankeeda ilaa iyo inta AMISOM ay dalka oo dhan ku soo celineyso Nabad iyadoo arrintaan ay dhalin karta shakki ah goormey baxeysaa iyo qaabkee u baxeysaa ? goormaa AMISOM ay xasilin doontaa dalka oo dhan iyadoo aan haba yaraatee muuqanin qorshe cad oo muujinaaya barnaamijkaas, kana soo baranney taariikhda dalalka ciidamo noocaas ah loo direy oo ilaa iyo hadda ay joogaan iyo danaha Dhaqaale iyo Siyaasadeed ay leeyihiin dalalka ciidamadooda keeney Somalia.